Guud ahaan marka laga hadlayo, waxaan soo iibsanaa nadiifiyeyaasha guryaha si ay u nuugaan qashinka, laakiin dhab ahaantii, waxyaabo badan lama nuugi karo, oo waxaa suuragal ah inaadan si fiican u aqoon. Marka maanta waxaan ka wada hadli doonnaa waxa aan nuugi karin nadiifiyaha faakiyuumka. Xusuusnow inaad fiiro gaar ah u yeelatid oo aadan sameynin wax waxyeello u leh vacuu ...
Maaddaama ay tahay qalabka ugu muhiimsan ee nadaafadda guryaha - nadiifinta faakiyuumka, waxay ka ciyaartaa door aad muhiim u ah, ku dhowaad qoys walba waa aalad loo baahan yahay. Huufarka waa fududahay in la isticmaalo, laakiin dad badan ayaan jeclayn nadiifinta iyo dayactirka faakiyuumka. Aynu baranno sida loo nadiifiyo loona ilaaliyo va ...
Warshadeenu waxay jirtay 10 sano, marwalbana waxaan iskudayeynaa sida ugu fiican inaan siino alaabooyinka ufiican macaamilkeena, waxaan hubinaa gabal walba kahor inta aan la dirin, waxaan rajeynaynaa gabal kasta oo gacanta macaamiisheena kujira inuu fiicanyahay oo uqalmaa Laakiin waxaan ognahay in kaliya alaab duug ah aysan ku filneyn, si loo ...